Ny Mpitarika ny Fiarahana amin'ny Zazavavy Silamo
Ny Mpitarika ny Fiarahana amin’ny Zazavavy Silamo
Raha ny teny hoe»fampihorohoroana»toa ho voalohany izay tonga ao an-tsaina, rehefa maheno momba ny Silamo, fa tsy inona ny finoana Silamo dia rehetra momba ny. Voalohany indrindra, ny finoana Silamo dia manodidina ny iray miliara ny mpino, ary betsaka ny olona toa niova fo izany ny fivavahana. Na dia eo aza ny ankamaroan’ny mpampihorohoro milaza ho Silamo, ny Silamo mihitsy no lavitry ny maha fivavahana ny fankahalana ary ny famonoana olona. Isan-taona dia maro ny olona izay tsy teraka Silamo hanatevin-daharana izany ny fivavahana satria izy ireo dia mihevitra ny fivavahana ho mahay mandefitra kokoa noho ny Kristianina, na noho izy ireo tsy mpino isan-se ary nahita ny Silamo tsara kokoa ny lanilany. Fa nahoana ny olona tandrefana dia tena vonona hampihatra ny tatsinanana ny finoana, izay tena henjana noho ny Bodisma. Ny valiny dia mitoetra ao henjana amin’ny lahy sy ny vavy andraikitra ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy. Izany no mahatonga ny vehivavy izay mahita ny tenany ho tsy mahazo aina amin’ny tandrefana idealy ny asa-mirona ny vehivavy misafidy ny ho lasa Silamo. Izany no nahatonga ny olona tandrefana izay mitady ny vadiny sy ny reny ho an’ny ankizy matetika kosa ny vehivavy Silamo. Ary raha toa ianao ka iray tamin ireo lehilahy, izany mpitari-dalana ho anao. Raha ny any amin’ny firenena tandrefana izay vehivavy mahazo be dia be kokoa noho ny any amin’ny faritra atsinanan’i firenena ny filalaovana fitia no fomba tsara indrindra mba hanehoana ny fitiavana ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy. Fitia mandeha tanana amin’ny tanana amin’ny lela-amin’ny-takolaka hatsikana, dia toy izany matetika no sarotra ny hilaza, na ny fitia mandeha amin’ny lalana marina na dia iray aminareo dia mananihany fotsiny. Izany no mahatonga ny tandrefana mampiaraka dia sarotra be noho ny Silamo ny fikarakarana fampihaonana sy ny filàna betsaka kokoa ny ezaka noho ny atsinanana mifanitsy. Silamo, ny vehivavy dia tsy mahazo manadala ankizilahy. Noho izany, ahoana no mba hahatakatra raha ny Silamo ankizivavy tiany ianao, na tsia. Raha ny marina, ao amin’ny Silamo ny fiaraha-monina ny zava-drehetra dia fomba tsotra. Ny famantarana ny mahaliana dia tena saro-takarina sy miorim-paka bebe kokoa eo amin’ny vatana sy ny fiteny noho ny ao am-bava ny teny. Tsia, tsy misy idirany amin’ny kibo mandihy. Te-pianakaviana miompana kokoa ny vehivavy, mahatsiaro. Amin’ny Silamo, ny fiaraha-monina, dia afaka mahatakatra fa ny zazavavy tia anao izy raha toa ka mijanona ao amin’ny efitra iray ianao irery ihany no. Raha dia manao nentim-paharazana Silamo akanjo, dia te-haneho ny miahy anao mamela anao hijery ny tarehiny sy ny tanany. Hafahafa, fa mbola, dia tsotra be noho izay rehetra fitia zavatra. Raha toy ny rehefa ny lehilahy sy ny vehivavy samy hafa ny lahy sy ny vavy andraikitra noho ny mampiaraka ny vehivavy Silamo dia ny marina ny safidy. Ao amin’ny fiaraha-monina Silamo ny olona miasa sy ny famatsiana ny fianakaviana, raha vehivavy dia tsy maintsy hiatrika ny manasa sy ny ankizy. Tsy ny mahazatra tandrefana vehivavy izay milaza fa izy mahazo vola ampy ho roa ianao, ary tiany ny asany, ary angamba tokony hiatrika ny manasa sy ny fiambenana ny zaza. Manadino ny momba izany variant fiainana ianao, raha mikasa ny hanambady zazavavy Silamo. Ny vadiny ve ny lehilahy rehetra ny zava-drehetra. Ohatra, raha toa ianao mampiaraka ny Silamo sy zazavavy izy dia manana ny fiara, dia tokony hitondra fiara na oviana na oviana ianao hihaona. Tsy tokony hitondra fiara na dia izy no olona iray izay manana ny fahazoan-dalana hitondra fiara. Zava-dehibe iray hafa momba ny Silamo, ny vehivavy ho toy ny vadiny dia ny tsy fivadihana. Vehivavy silamo dia zara raha tsy mahatoky. Mazava ho azy, dia afaka mihevitra fa noho ny lalàna any amin’ireo firenena Silamo. Fa izao tontolo izao ny Silamo dia mbola mihoatra lavitra kokoa noho ny teny arabo ny firenena. Ohatra, Tiorkia dia mihoatra lavitra demokratika. Tsy maintsy mandinika ny haavon’ny ny fanajana ny fanambadiana, raha tsy te-hiatrika ny sasany manafintohina vokany. Tsy tena nandre fa tantara momba ny sasany ny vadiny any amin’ny firenena arabo izay efa maty tsy mahatoky ny vadiny, ary avy eo dia afaka ny fitsarana, satria ny vono olona ny tsy mahatoky no tsy famonoana mihitsy. Tsara, ity fitsipika ity miasa, na fomba. Ny vadiny izay efa maty ny vadiny noho ny maha-tsy mpino dia ho ihany koa ny tavanao tsy misy restraining baiko toy ny tsara. Vehivavy silamo diniho manao ny vadiny ho sambatra ao am-pandriana ny asa. Noho izany, isaky ny tianao, izy no manome izany ho anao amin’ny fomba tsara indrindra. Mazava ho azy, tamin’ny fotoana harems, ny vehivavy dia nihevitra ny fomba hitondrana fahafinaretana ny sultan ao amin’ny tena hafahafa ny fomba, fa ny fotoana ela lasa. Koa, tsy misy olona te kokoa noho ny vady roa amin’ny teny arabo ny firenena amin’izao fotoana izao. Dia lasa lafo loatra sy teny arabo ny fananana vady maro izay navadika ho vola-monina fifandraisana. Na inona na inona hanolotra ho anao nanome ny iray amin’ny vadiny, dia tokony tsy hanadino ny momba ny fitondrana ny fanomezana ny hafa ny vadiny. Raha tsy izany, izany rehetra izany dia mifarana any amin’ny fitsarana. Fihetseham-po tsara vintana tsy ho amin’ny teny arabo ny vadiny roa ny vadiny. Tsy mandrara anao ho nofy ny momba ny ankizivavy maro amin’ny fahalalana ny mahafinaritra ny sultan, fa ianao toa tsy mahita zazavavy miaraka izany fahalalana izany ankehitriny. Na izany aza, raha tianao ny firaisana ara-nofo ny fiainana mba ho nohatsaraina izy dia hianatra na inona na inona tianao ihany no mba hahafaly anao. Zavatra iray ianao dia tsy maintsy mahatsiaro, rehefa matory amin’ny zazavavy Silamo, ny Silamo, ny vehivavy dia manohitra vohoka. Ny fanalan-jaza koa tsy manohana ny ao amin’ny Islamo, ka na dia tokony hampiasa fimailo, na ho vonona ho ny ray. Rehefa avy namaky ny momba ny tombontsoa azo avy amin’ny Silamo, ny vehivavy dia tena mihevitra ny fiarahana amin’ny zazavavy Silamo. Fa ny zava-drehetra dia sarotra kokoa eto. Aza miezaka ny hitady ny Silamo mampiaraka ny fitsipika momba ny Aterineto, ianao dia tsy mahita toy izany ny boky, satria fotsiny hoe tsy misy. Ny silamo dia tsy mahazo ny daty. Ianao vao nianatra izany. Tsara, izay no valin ny fanontaniana hoe nahoana ny fianakaviany hanambady ny zanany eo anoloan’ny ankizy nianatra ny fomba miteny. Tsotra fotsiny, satria ny Silamo dia tsy mahazo ny daty. Saingy, tsy mandeha burring vehivavy Silamo mampiaraka hevitra, ka tsy ho ela. Raha Silamo rehetra niaina araka ny fitsipika dia mety tsy ho tafavoaka velona ka mandraka ankehitriny. Raha toa ka ianao ao amin’ny fitiavana amin’ny zazavavy Silamo monina any amin’ny firenena tandrefana, angamba tsy hisy mihitsy ny olana, raha miezaka izy ireo mba handrapaka. Inona no azonao atao dia ny hianatra izay firenena izy dia avy. Raha izy no avy any Torkia, na Indonezia, ny zava-drehetra, dia eny ary. Tsy mampaninona mampiaraka amin’ny rehetra. Raha misy tsy Silamo zazavavy manodidina anareo, kanefa tsy nofy iray, dia foana ny Aterineto. Maro ny zazavavy Miozolomana no mampiaraka an-tserasera. Misy na dia Silamo mampiaraka toerana ho an’ny Silamo mba hahafantatra ny tsirairay sy ho an’ny tandrefana ny olona izay te daty Silamo. Noho izany, tsy hiandrasana ela intsony dia afaka mamorona kaonty ao amin’ny Silamo sasany, ny mampiaraka toerana, ary manomboka mifampiresaka amin’ny ankizivavy tianao. Zavatra iray ianao dia tokony hahatsiaro — ny fikasana dia tsy maintsy ho lehibe. Izany inoana fa ianao miezaka hanatona zazavavy Silamo any amin’ny iray amin’ireo firenena izay misy izany ny fivavahana no manapaka. Ny mifanohitra dia ianao hihaona olona iray izay miaina amin’izao fotoana izao na ny fianarana eo amin’ny firenena. Vehivavy silamo toa ny vahiny ary izy ireo dia tena mafana. Maro ny Tandrefana ny olona dia tahaka ny daty iray any Azia hatsaran-tarehy. Eny, izany no hevi-diso fa ny Silamo dia voatery Arabo. Ny betsaka indrindra ny Silamo monina any Indonezia. Ankoatra izany, dia maro ireo hevitra raiki-tampisaka sy ny fitsarana an-tendrony momba ireo vehivavy ireo izay mahatonga ny olona misalasala. Afaka ny Silamo zazavavy daty ny tsy-Miozolomana? Izany no fanontaniana izay mitandrina mivotra mivaingana loatra ny hoe tandrefana. Araka ny efa fantatrareo, ny fitiavana tsy mahalala ny fivavahana, noho izany ny zavatra rehetra azo atao, indrindra fa raha ny ankizivavy iray manaiky ny kolontsaina Tandrefana sy ny drafitra mba handrapaka amin’ny tontolo tandrefana. Mba hahatakatra ny vehivavy Silamo tsara kokoa, dia tokony hiala amin ny fivavahana sy ny hifantoka amin’ny ara-kolontsaina, lafin-javatra hafa. Ny olona rehetra dia mitovy irrespective ny finoana. Rehefa mihaona amin’ny olona isika, dia tsy miraharaha loatra na izy na izy professes ny finoana Silamo na Kristiana na zavatra hafa ny fivavahana. Isika dia liana amin’ny ny na ny toetra manokana. Mandritra izany fotoana izany, zava-dehibe ao an-tsaina ny fahasamihafana ara-kolontsaina ary ny fanajana ny kolontsaina amin’ny alalan’ny toerana misy anao. Alohan’ny hanombohanao ny fiarahana amin’ny zazavavy Silamo, na an-tserasera na manatona azy eo amin’ny tena fiainana, dia tokony hianatra maro fitsipika izay hanampy anao hanao ny zava-drehetra tsara.
Ny zavatra voalohany tokony ho tonga saina fa ny Silamo dia afaka ny ho samy hafa. Izany dia midika fa na dia ao amin’ny firenena iray ihany, olona izay miantso ny tenany ho afaka miara-miaina ireo Silamo araka ny fitsipika samy hafa, ary mino amin’ny zavatra hafa. Mety ho ilaina ny mahafantatra izay indrindra, ny zavatra mahaliana anao no avy amin’ny toy izany, izay afaka manara-maso ny toe-draharaha misy.
Mifidiana fotoana mety
Tsy maintsy ho mahafantatra ny zava-misy fa ny Silamo hivavaka in-dimy isan’andro. Raha toa ka misafidy ny fotoana ny chat na ny daty, ho azo antoka izany dia tsy hifanindry amin’ny ny fivavahana fotoana. Tafiditra ao ny fahazarana mihinana sakafo. Manantena izahay fa tsarovy fa ny Silamo tsy mihinana henan-kisoa. Tandremo fa ao an-tsaina rehefa nandidy ao amin’ny trano fisakafoanana. Mba ho eo amin’ny lafiny azo antoka, dia aoka ny vehivavy iray nisafidy ny tenany. Mikasika amin ny ankapobeny ny lohahevitra. Isika dia mahafantatra ny fomba fakam-panahy izany dia ny manontany ny daty maro ny fivavahana ireo fanontaniana mifandray amin’ny, fa ianareo dia tokony hitandrina ny resaka tsy miandany. Na dia ny firesahana momba ny toetrandro ho ao tsara. Aza hanelingelina azy nandritra ny Ramadany. Raha tsy te-ho lasa teo, tsy mangataka zazavavy Silamo avy ny Ramadan. Na izany aza, raha toa izy tsy ara-pivavahana, mandeha mialoha. Ho lehibe ao an-fikasana. Ny fitsipiky ny zazavavy Miozolomana mampiaraka hanafoanana tsotsotra ny fifandraisana. Mba ho matotra ianao rehefa miditra ao amin’ny fifandraisana rehefa zazavavy Silamo
← Izay toerana afaka mahita ny manan-karena Arabo olona. Izay website afaka aho ny hihaona sy ny daty Arabo lehilahy: Angataho Amiko Fifadian-kanina
Hafa, ny fandikana teny arabo, Anglisy, frantsay, arabo Reverse →